Carignan - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
UCarignan unhlobonhlobo oluvuthiwe lwewayini lwewayini elivame ukusetshenziselwa ukukhiqiza ama-blend kanye nama-varietal wine. Umzali wezinhlobonhlobo akaqiniseki.
Ezihlukahlukene zivela eSpain, ezibizwa ngokuthi idolobha laseCariñena esifundazweni sase-Aragon. Liye lakhiqizwa esifundeni saseLouedoc Roussillon, esasijwayele ukuba yingxenye yombuso waseCatalunya-Aragon futhi yaba yingxenye yeFrance ngo-1659, kusukela ngekhulu lama-12.
Indawo engaphansi kweCarignan yokukhiqiza eFrance iye yanda kakhulu eminyakeni, ngenkathi ehla eSpain. Lezi zinhlobonhlobo zakha idumela elibi eminyakeni yama-1970, lapho abalimi baseFrance behlwanyela amahektha ayizinkulungwane zeCarignan ngenxa yokukhiqizwa kwayo okuphezulu ekukhokheni ngosizo lukaHulumeni olwalusekelwe ekuveleni kwemikhiqizo.
Umphumela waba ukukhiqizwa kwezigidigidi zamalitha wekhwalithi engafanele iCarignan iwayini. Indawo engaphansi kokukhiqizwa eFrance iye yehliswa kakhulu kusukela ngo-1990, ngenxa yokugqugquzela uhulumeni, futhi kuye kwagxila kakhulu ekukhiqizeni izinga eliphezulu lewayini leCarignan.
Izinhlobonhlobo ziyaziwa nangokuthi uCarignane e-United State, eCarignano e-Italy, noCarignan nendodana eFrance naseTinto Mazuela noma uSamsó eSpain.
Uprofesa u-Abraham Izak Perold ngawo-1920 uthe ithemba lakhe lokuthi uKarignan uzokhiqizwa eNingizimu Afrika ngenxa yamandla okuhluka okumele aphumelele ngaphansi kwezimo ezomile zezulu. Kubonakala sengathi ukukhiqiza kuphela kwaqala ngempela phakathi nawo-1970, kanye nomndeni wakwaBasson, owatshala e-Die Slot e-Perdeberg ukutshala esinye sezivini zokuqala ngo-1972.
UCharles Emuva kwe-Fairview usezakhele njengomunye wabakhiqizi abahle kakhulu beCarignan single wine varietal eNew World noPegleg Carignan, owenziwe ngamagilebhisi emivini yamahlathi e-Die Slot. Iwayini libizwa ngeCobus Basson, eneminyaka engu-17 ubudala, elahlekelwa umlenze ngesikhathi ugandaganda eguqulwa futhi egijima phezu kwakhe ngesikhathi esiza uyise evini likaCarignan.
Izinhlobonhlobo zinezinyathelo ezincane eNingizimu Afrika, ezinamahektha angaphezu kuka-100 atshalwe ngo-2016. Iningi lalezi zitshalo ziseSwartland, ePaarl naseStellenbosch. Iwayini elihle kunazo zonke zeCarignan libonakala livela emvinini yamandulo emayini lapho ukukhiqizwa kunqunyelwe khona.
Ezihlukahlukene ngumlimi onamandla, onokukhiqiza okuphezulu okuphakathi kuka-15 t / ha kuya ku-20 t / ha.
Amagilebhisi avuthwe kusukela ngasekupheleni konyaka, kusukela engxenyeni yesibili kaMashi.
Amajikijolo amnyama, azungeze futhi afana namasayizi amancane. Isikhumba sinzima futhi sinzima.
Amaqabunga amancane, aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-oblong anamahlanu aqoshiwe.
Izinhlobonhlobo zitholakale ezifweni zengalo efile, i-powdery ne-downy isikhutha futhi izwela ubuchopho.
Nakuba iNingizimu Afrika ikhiqiza iwayini elilodwa elilodwa elilodwa elilodwa leCarignan, iningi lewayini lisetshenziselwa ukukhulisa umbala ngokubomvu, ngezinhlobo ezifana neShiraz, Cabernet Sauvignon noMouvédre njengabahlanganyeli abadumile kakhulu.
EFrance naseSpain kuvame ukucindezeleka ngeCinsaut black, Grenache noir no-Tempranillo ukukhiqiza iwayini elilula lokuphuza.
Izinhlobonhlobo zivame ukhiqiza ama-flavour flavors, ngamathoni ka-cranberry, sitrobheli kanye nokusajingijolo.Translated by Zodwa Makondo